Burmese Business Man – Phillip Maung at the US Congress | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Kyaw Thu – Equal Share
Interview with Gaw Phi Ar – Why go home ? →
Burmese Business Man – Phillip Maung at the US Congress
မြန်မာပြည်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဦးဖိလစ်မောင်ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အောင်မြင်တဲ့ အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးအဖြစ် သမ္မတ အိုဘားမားက ကြာသပတေးနေ့က သမ္မတ အိုဘားမား လွှတ်တော်မှာပြောတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းကို သမ္မတကတော် မစ်ရှဲလ်အိုဘားမားနဲ့အတူ တက်ရောက် နားထောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဦးဖိလစ်မောင်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၈ ခုမှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၄၀၀ ကျော်နဲ့ ဆူရှီကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပါ။ သူနဲ့ သမ္မတအိုဘားမား ဘာတွေပြောဆိုခဲ့ကြသလဲဆိုတာ သိရအောင် ကိုကျော်အောင်လွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား နဲ့ သမ္မတကတော် မစ်ရှဲလ်အိုဘားမားတို့က ဦးဖိလစ်မောင် ကို လွှတ်တော်ထဲအထိ ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်။ အဲဒီအကြောင်း ကျနော့်ကို ရှင်းပြပါခင်ဗျ။ ဘာကြောင့် တွေ့ဆုံရတာလဲ။ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ဘာတွေပြောသလဲ။ တခြား ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ဆုံခဲ့သလဲ ဆိုတာပါ ရှင်းပြပါခင်ဗျ။ –
“အခုချိန်မှာ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများ စီးပွားကျနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီက ဘာကြောင့် စီးပွားတွေ တက်နေတယ်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများ ၀န်ထမ်းတွေ လျော့နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့က ဘာဖြစ်လို့ ၀န်ထမ်းတွေ ထပ်ပြီးတော့ ငှားရမ်းနေလဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့ American dream ဆိုပြီးတော့ သူတို့ ဥပမာပြချင်တဲ့သဘောလည်း ပါတာပေါ့နော်။”
ဆိုတော့ ဦးဖိလစ်မောင်က သမ္မတမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လို ပြန်ဖြေခဲ့ပါသလဲခင်ဗျ။ ဒီလို စီးပွားကျနေတဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်ရတာ ဘယ်လိုအချက်ကြောင့်ပါလဲ။ –
“ကျနော်ကတော့ အဓိက အချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ culture လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပျော်အောင်လုပ်၊ သူတို့ပျော်အောင်လုပ်ရင် သူတို့က ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်လေ။ ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ သူ့ဟာသူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို မိသားစုလို ဆက်ဆံ၊ သူတို့ကို လေးစားတယ်ဆိုရင် သူတို့က သစ္စာရှိရှိနဲ့ အကုန်လုံးလုပ်လို့ အောင်မြင်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။ တဦးနဲ့တဦး၊ တယောက်နဲ့တယောက် အကျိုးပြုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။”
သမ္မတ အိုဘားမား မနေ့တုန်းက ပြောသွားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အများကြီး ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ ဘီလျံနဲ့ကိုချီပြီးတော့ ကူညီမယ်လို့ သူ လွှတ်တော်ကို တင်ပြတာရှိတယ်ခင်ဗျ။ ဦးဖိလစ်မောင် တို့ကိုရော ငွေရေးကြေးရေးအရ ထောက်ပံ့ပြီးတော့ လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ဖို့အတွက် သမ္မတက အစီအစဉ်တွေ ဆွေးနွေးတာ ရှိပါသလား။ –
“တဦးချင်းရယ်လို့တော့ ကူညီဖို့တော့ သူ့မှာ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့က အသေးစားလုပ်ငန်းတွေ အားလုံးကို အခွန်လျော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ လူတိုင်းကို ကူညီဖို့၊ အလုပ်သမားပိုငှားဖို့ အဲဒါတွေကိုတော့ အဆိုပြုထားတဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဦးဖိလစ်မောင်က အခု အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော်နဲ့ပါ တွေ့တယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ နမူနာ ပြရလောက်အောင်ကို အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမား တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လောက်အထိ အောင်မြင်အောင် ဆက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးတွေ ရပါသလဲ။ –
“ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီ ဘယ်လောက် အောင်မြင်မအောင်မြင် တိုင်းတာတာကို ကျနော်တို့ ဆိုင် ဘယ်လောက်ချဲ့နိုင်သလဲ၊ ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့တော့ ကျနော်တို့ တိုင်းထွာလေ့မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်အထိ စားဝတ်နေရေး မအောင်မြင်တယ်၊ အောင်မြင်တယ် ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ တိုင်းတာပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ သမ္မတကို ကျနော်ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်တာနဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ အတူတူပဲ။ ကုမ္ပဏီတခု တိုးတက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံရှာနိုင်သလဲ အပေါ်မှာ မမူတည်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဘယ်လောက် ကျနော်တို့ ကြည့်ပေးနိုင်သလဲ၊ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာပဲ။”
ဦးဖိလစ်မောင်ကို အမေရိကန်က ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးလို့ ပြောလို့ရပြီလား၊ မီလျံနာ လို့ပြောရမလား။ –
“ကျနော့်ကိုကျနော်တော့ အဲဒီလိုအထိတော့ မသတ်မှတ်သေးပါဘူး။ ကျနော် အလုပ်တခု လုပ်နေတာ ပိုက်ဆံတခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် အလုပ်တခုကို မပျော်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ကျနော် ဒီလုပ်ငန်းမှာ လုပ်တော့မယ်မထင်ဘူး။ နောက်လူတွေကိုလည်း ကျနော့်အနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာက အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ပျော်လို့လုပ်တာလား။ အလုပ်ကို ပိုက်ဆံကြောင့် တခုတည်းနဲ့တော့ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပဲ။ မပျော်တော့တဲ့အချိန်ကျရင် ဒီအလုပ်ကို ဘာလို့ဆက်လုပ်မှာလဲ။”
ဦးဖိလစ်မောင်ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
(News & Photo from VOA Burmese News Website)
Posted by oothandar on September 11, 2011 in Interview